I-China Fine Factory intengo yosizo lokugaya usimende I-Factory Additive Manufacture and Factory | I-Fluffier
Fine Factory intengo yosizo lokugaya usimende Isithasiselo se-Cement
I-Chemical Auxiliary Agent, I-Chemical Auxiliary Agent
Ingxube yokugaya usimende, isithako sikasimende
Ama-ejenti Asizayo Wokuhlanganisa, Amakhemikhali E-elekthronikhi, Ama-ejenti Esikhumba, Amakhemikhali Ephepha, Izithasiselo Zephethiloli, Ama-ejenti Epulasitiki Ensiza, Ama-ejenti Enjoloba, Ama-surfactants, Ama-ejenti Asizayo Endwangu, Amakhemikhali Okuhlanza Amanzi, okokugaya i-slag kuphela.
0.1% wesisindo sikasimende
Usizo lokugaya usimende 0.1%
Lo mkhiqizo usekelwe kuma-molecule e-polyol, ukuguqulwa kwamangqamuzana ngesikhathi esifanayo kuhlanganiswe nezinye izakhi zokugaya eziphilayo. Lo mkhiqizo ungasetshenziswa ngokuqondile njengohlobo loketshezi olusizayo lokugaya. Ingase futhi ihlanganiswe nezinye izinto ukuze kuqinisekiswe amandla kasimende.Lo mkhiqizo usetshenziselwa ukukhiqizwa kwezinsiza zokugaya, unganciphisa intengo ephezulu yezinto zokusetshenziswa (njenge: triethanolamine)
ukuncika, ngesikhathi esifanayo, amandla osimende sekwephuzile awanayo imiphumela emibi.
Isingeniso: I-MJ-3B iyinsiza yokugaya eyinhlanganisela, uketshezi olunsundu olungenabo ubuthi futhi olungagqwali. Futhi ayishi, ayiqhumi futhi ayilimazi umzimba womuntu. Okuqukethwe kwayo kwe-alkali kungaphansi kuka-2 ‰ kanti inani lengxube liyi-0.03% yesisindo sikakhonkolo. Ingathuthukisa injabulo ye-clinker namandla amaphakathi noma asekupheleni kwesikhathi. Isebenza ku-p.o42.5 kanye no-p.o52.5 usimende. Ukukhishwa kwemayela ngehora kungathuthuka ngo-10% -30% futhi ukuminyana kungafinyelela ku-1.08t/m³-1.15t/m³.
I-1, inani elilinganiselwe lalo mkhiqizo linganciphisa ngempumelelo ukungqubuzana komshini futhi likhuphule u-10% -20% wokukhishwa komshini wokugaya we-slag ngehora.
2, ingathuthukisa ngempumelelo umsebenzi we-slag.
I-3, ilungele uhlelo lokugaya lwesifunda oluvaliwe kanye nohlelo lokugaya lwesekethe oluvulekile.
4, ingasiza ukugaywa kwe-slag, isuse i-electrostatic adsorption futhi ikhulise indawo ethile yenhlawulo yamaminerali, ngaleyo ndlela ukukhiqiza nokusebenza kungathuthukiswa.
Okuqukethwe Okuqinile %:80%±1.5
1, uhlelo lokusebenza: kuphela ukugaya slag
2,inani lokuxuba:0.03% wesisindo sikasimende
1, igcinwe esitsheni esivaliwe, igweme ukukhanya kwelanga kanye nezinga lokushisa elibandayo.
2, lungisa imingcele efanele yesistimu yokugaya ngesikhathi sokusetshenziswa
I-3, i-TGA-5 idinga umswakama ophelele wezinto ezibonakalayo awukwazi ukudlula u-3% futhi izinga lokushisa lokugaya alikwazi ngaphezu kuka-140 ℃
4, isikhathi sewaranti yizinsuku ezingama-90;
5, egcinwe endaweni yokushisa engu -5 ° C ~ 45 ° C
Lo mkhiqizo uyisigubhu sepulasitiki esingama-200kg noma amathani angu-1000kg emiphongolo noma ukupakishwa kwezikhwama eziwuketshezi, ukugwema ukubanda, kusebenza unyaka owodwa. Ingaphezu kwempilo yeshelufu okufanele iqinisekiswe ngokuhlolwa ukuthi ingagaywa kabusha yini.
1. Phakathi kwezinsuku ezingu-7-10 kusukela ngosuku lokukhokha
2. I-oda lesampula (faka i-10KG) izolethwa phakathi kwamahora angama-24
Fedex, DHL, TNT, EMS, OCS, Aramex njll.
Phendula phakathi namahora angu-24
A: Siyizimboni zemboni emkhakheni we-concrete admixture iminyaka engaphezu kwe-10.
2. Q: Uyakwamukela ukwenza ngokwezifiso?
IMP: Yebo, singakwazi futhi ukukhiqiza i-admixture ngokuhambisana neresiphi yakho.
3. Q: Ithini imigomo yakho yokukhokha?
A: Inkokhelo ≤1000USD, 100% kusengaphambili.
Imigomo yokukhokha: > 1000USD, T/T (30% kusengaphambili, ibhalansi yebhilidi yokulayisha) noma i-L/C lapho ubona.
Noma njengesicelo sakho.
4. Q: Ingabe amasampula amahhala?
A: Yamukela ukuhlolwa kwesampula kwamahhala, umthengi uthwala impahla.
5. Q: Singakanani isikhathi sakho sokulethwa?
A: Ngokuvamile iviki eli-1 kuye kwayi-2, kuye ngenani le-oda.
2. Umkhiqizi wokuqala owacwaninga ngokuzimela, wathuthukisa futhi wakhiqiza imikhiqizo yezithasiselo zamakhemikhali zokwakha, okuhlanganisa i-Redispersible Polymer Podwer, iHydroxypropyl Methyl Cellulose, I-Polyvinyl Alcohol kanye ne-Superplasticizer eJinan, inhloko-dolobha yesiFundazwe saseShandong.
Okwedlule: Izithasiselo zesihlabathi sosimende esomile
Olandelayo: Intengo yasefekthri i-admixture Izithasiselo zikasimende zosizo lokugaya usimende
Isengezo Sokugaya Usimende
Izithasiselo Zokugaya Usimende
Isengezo se-Calcium Chloride Cement
Isithasiselo Se-Cement Abrasive
Izithasiselo Zesimende Ukuze Ziqine
Isengezo Sokusetha Esisheshayo Sesimende
Isithako Sokugaya Usimende
Isengezo se-Cement Hardener
Factory Price Cement Ukugaya Izithasiselo
Factory Sale Cement Ukugaya Izithasiselo
Isengezo se-Latex Cement
Isengezo Sokugaya Isimende Esisezingeni eliphezulu
Izithasiselo Zokugaya Zesimende Ezisezingeni Eliphezulu
Intengo yasefekthri i-admixture Cement Additives Cement...
Usizo lokugaya usimende wezimboni